Kacha mma mobile udu | Zọpụta ugbu a na ụgwọ gị | Akụkọ akụrụngwa
Ọnụ ọgụgụ ekwentị kachasị mma dị na ahịa
N'oge na-adịghị anya gara aga, onye ọrụ ọ bụla nke ngwaọrụ mkpanaka nwere ike ịhọrọ n'etiti ọnụọgụ ekwentị ole na ole, nke n'ọtụtụ ọnọdụ yiri nke ahụ nke anyị ga-akwụkwa nnukwu ego. N'ụzọ dị mma, ihe niile agbanweela ọtụtụ oge na taa ọtụtụ ndị na-ahụ maka ekwentị na-anọ n'ahịa na-enye anyị ọnụ ọgụgụ dị ukwuu nke ekwentị mkpanaka. Fọdụ dị oke ọnụ ala, nke nwere nnukwu ọdịiche dị n'etiti ha yana yana ọnụahịa dịgasị iche iche. Iji mee nke a taa, anyị ga-eme ntụnyere na-atọ ụtọ n’etiti ha niile. Dị ka o siri ike ịmalite ebe, anyị ga-eme ya site na nyochaa ụzọ atọ kachasị elu anyị nwere ike isi kwụọ ụgwọ ugbu a:
Gwọ dị ọnụ ala: 8GB nke simyo maka € 5
Ọnụ ọgụgụ zuru oke: 15GB na Virgin Telco na-akparaghị ókè maka naanị € 9
Kacha mma mobile ọnụego: 25GB na finetwork na-akparaghị ókè maka naanị € 14,90
Na mba anyị, a ka nwere nnukwu ndị ọrụ atọ dịka Movistar, Vodafone na Orange, soro dịpụrụ adịpụ site na mbụ dị ka MásMóvil (cheta na ọ nwetara Yoigo iji nye nkwado dị mkpa) na Virgin Telco kacha nso nso a kwadoro na ya mbuso agha nke otu Euskaltel. Gburugburu ndị a, anyị nwere ndị ọrụ akpọrọ mebere na-enye anyị ọnụego na-atọ ụtọ ma dịkwa ọnụ ala.
Ọnụego Mepụta Onwe Gị Nke 10GB Simyo 10GB 6 / ọnwa
Ọnụego 14.95 Amena 20GB na-akparaghị ókè. 14.95 / ọnwa
Dịruru Plus 8GB akparaghị ókè oku na 8GB 8.90 / ọnwa
La SinFin Ọnụego data na-akparaghị ókè na oku na-akparaghị ókè 35 / ọnwa
Gaa oke mmanụ oroma Unlimited data na-akparaghị ókè oku 35.95 / ọnwa
Ọ bụrụ n ’ị na-eche ịgbanwe onye na-arụ ya ma ọ bụ na-agbanwe ọnụọgụ, nọrọ na anyị n’ihi N'isiokwu a, anyị ga-egosi gị ọnụ ala kachasị dị ọnụ ala ma dịkwa ọnụ ala karịa na ahịa.
Ugbu a mobile ọnụego maka Yoigo Ha bụ otu n'ime ihe kachasị mma na ahịa, ọ bụ n'ihi ọnụ ọgụgụ GB dị ukwuu nke ha na-enye ndị ọrụ, na ọnụ ala dị ala. Ọtụtụ ndị ọrụ na-agagharị na netwọk nke netwọk maka ogologo oge, mgbe ụfọdụ ọ na-achọ obere oku na-erughị ma na-achọ ọtụtụ ihe iji nweta data iji jiri WhatsApp, Facebook ma ọ bụ otu n'ime ọtụtụ ngwa ndị ọzọ dị mkpa iji jikọọ na permanntanetị kpamkpam.
Yoigo jisiri ike nweta mkpa ndị ọrụ a niile na-enweghị ike ịpụ megabytes na atụmatụ data ha. N'ezie, ị maara n'ezie ụgwọ ya kachasị ama: La SinFín. Ọnụego a nwere GB na-akparaghị ókè ịnyagharịa na mkpanaka gị yana, na mgbakwunye, ọ nwere oku na-akparaghị ókè. SinFín de Yoigo bụ otu n'ime ọnụego ole na ole na-enye nnukwu gigabytes dị otú a iji nọrọ € 35 / ọnwa. Ọ bụrụ n’ịchọrọ iwere mbelata a na ụgwọ ọnwa gị ị nwere ike mee ya n’ebe a.
N'ime ọnwa ole na ole MásMóvil esiwo na ịbụ ụlọ ọrụ na-enweghị ọtụtụ ọnụnọ na ahịa dị ka a mebere mobile ọrụ ka bụrụ onye ọrụ Spanish nke anọ, na nzụta Yoigo.
A na-ekewa ọnụego ọnụego Más ụzọ abụọ: udu ndị onye ọrụ ahaziworị na ọnụego ị nwere ike hazie ka ọ masịrị gị. Atụmatụ nke MásMóvil na-enye anyị bụ abụọ: 8 GB na oku a na-akparaghị ókè maka € 8,90 maka ọnwa atọ mbụ yana 20GB nwere oku na-akparaghị ókè maka € 14,90.
Unlimited oku bụ ndị nkịtị denominator nke MásMóvil si ugbua ahazi udu. Mana ọ bụrụ na ị bụ onye na-erugharị karịa mkparịta ụka na ekwentị mkpanaaka gị, nhọrọ kachasị mma maka gị ga-ahazi ọnụego gị iji tụọ. N'ụzọ dị otú a, ịnwere ike ịgbakwunye karịa gigs (20GB) ma kpọọ na 0 cents kwa nkeji. Na nhazi a ị ga-enwe ike ịchekwa euro ole na ole ma e jiri ya tụnyere nke MásMóvil nwere 8GB.
Mee nkwekọrịta ọ bụla n'ime ọnụego ndị a site na ịpị ebe a.
Orange bụ ugbu a na ihe siri ike ikere ọnụ na Vodafone ka ha nwee ihe ùgwù nke ịbụ ndị ọrụ mkpanaka nke abụọ na ahịa. Maka nke a, emeela mgbanwe nke ogo ya niile n'oge na-adịbeghị anya, na-ebute katalọgụ nke kachasị na nke na-adọrọ mmasị. Mgbe afọ asaa anyị agaghịkwa ahụ ndị a ma ama na ụgwọ anụmanụ, ma anyị nyere ụzọ Gaa ọnụego.
Ndị ọrụ na-achọ ọtụtụ ihe gbasara oke na ịdị mma dị mma, n'ihi na ọnụego Go na-aza kpọmkwem isi ihe ndị ahụ. N'echiche a, Oroma na-enye anyị ọnụego Gbagolo laa, nke ha abụọ nwere data na-akparaghị ókè, ọdịiche nke onyinye ọ bụla dị na ike ilele ọdịnaya gụgharia na ogo dị elu (otu na HD na nke ọzọ ruru 4K) na ha abụọ na-enweghị njedebe oku.
Mana ọnụọgụ ọtụtụ gigabytes ka ịnyagharịa abụghị maka ndị niile na-ege ntị na ọ bụ ihe Orange chere banyere. Maka otu ihe a, ọ na-enye ọnụọgụ atọ ọzọ na obere gigs: Mkpa, Gaa Mgbanwe na Kidsmụaka. Na Mkpa, Oroma na-enye anyị 7GB ma kpọọ na 0 cents maka € 14,95 / ọnwa. Orange's Go Flexible ọnụego na-enye anyị ohere ịnweta 16,67GB na oku na-akparaghị ókè maka € 24,95 / ọnwa. N'ikpeazụ, ọnụego ụmụaka nwere ịntanetị nwere ihe ruru 2GB maka € 8,95 / ọnwa na nke dị mma maka mbadamba ụrọ gị ma ọ bụ laptọọpụ gị. Ọ bụrụ na ị nwere mmasị na ọnụego Go de Orange, ị nwere ike iku ha n’ebe a nfe.
Redlọ ọrụ na-acha uhie uhie bụ onye ọzọ n'ime nnukwu ndị dị na mpaghara Spanish yana nke ahụ na-enyekwa anyị ọtụtụ ọnụego mkpanaka. Dị ka oroma ma ọ bụ Movistar, Vodafone na-enye anyị ụdị ọnụego ọ bụla, nwere ụdị dị iche iche na ọnụ ahịa dị iche iche.
Companylọ ọrụ na-acha uhie uhie dị nso na ụdị ndị ọrụ niile, site na ndị na-eri megabytes kachasị na nkeji oge na ndị na-emefu otu ma ọ bụ nke ọzọ. N'ihi ya, anyị nwere Mobile Mini, na-akparaghị ókè, Maxi na-akparaghị ókè ngụkọta maka ndị na-eri nnukwu ihe gbasara data na nkeji nkeji.
Maka ndị na-ekwu okwu ma na-eri data, Vodafone gosipụtara Unlimited ngụkọta GB na-akparaghị ókè na 5G, nkeji na-akparaghị ókè. Ihe niile maka € 47,99 / ọnwa. Ọnụ ego dị n'etiti bụ Unlimited Maxi ụzọ na-akparaghị ókè GB na 4G + network, nkeji na-akparaghị ókè. Ihe a niile maka € 36,99 / ọnwa. N'ikpeazụ, ihe a na-akparaghị ókè bụ onyinye na data na-enweghị njedebe na ntanetị 4G (ọsọ ọsọ kachasị ọsọ 2Mbps) na nkeji na-akparaghị ókè maka € 32,99 kwa ọnwa.
Ọ bụrụ na ị nwere mmasị na Vodafone mobile udu, inwere ike iku ha ego na erughị nkeji 3 site ebe a.
Movistar N’aka ozo, nke ochie Telefónica bu onye n’enwe ikike na ahia nke ekwenti, site na nkpuchi ya nke oma n’udi obula nke obodo ayi ma maka ezi oru ndi n’enye ndi ahia. O di nwute na ego ha adighi ala dika otutu otutu anyi choro.
Dika ndi oru ozo mere, Movistar agbanwewokwa onyinye onu ogugu ya, obu ezie na obughi dika Orange mere. N'echiche a, Movistar na-enye anyị ọnụego atọ, nke ọnụ ọgụgụ buru ibu nke gigabytes pụtara.
La Movistar nkwekọrịta 2 ọnụego Enwere ike ịde ya dịka "ọnụego", ebe ọ na-enye anyị 5GB ka anyị jiri igwe na-agagharị na minit 50 na oku maka € 15 / ọnwa. Ọ bụrụ na anyị arịgo na pọtụfoliyo Movistar, ọnụego na-esote bụ nkwekọrịta XL nke na-enye anyị 15GB na nkeji oge na-enweghị njedebe nke ịkpọ oku gaa na akara ala na ekwentị maka bi 24,95 kwa ọnwa. Oge ikpeazu nke ọnụego, nkwekọrịta na-enweghị ngwụcha, nwere GB na-akparaghị ókè, nkeji na SMS maka ọnụahịa nke € 39,95 / ọnwa.
Onye ọzọ n'ime ndị na-ahụ maka ọrụ na-enweghị ike ịhapụ na ndepụta a bụ Ekwentị nke ahụ na-enye anyị ụfọdụ asọmpi kachasị asọmpi, n'akụkụ niile anyị nwere ike ịchọta n'ahịa. Kpọmkwem, ọ na-enye anyị ọnụego atọ dị asọmpi gbasara ahịa ndị ọzọ. N'ụzọ dị otú a, anyị na-ahụ ọnụego mbụ nke gụnyere 5GB na oku na-enweghị njedebe maka € 7,90 / ọnwa. Oge etiti ahụ na-enye anyị 10GB na nkeji na-akparaghị ókè maka € 11,90 kwa ọnwa.
N'ikpeazụ, anyị hụrụ ihe nwere ike ịbụ ihe kacha baa uru: 39GB na nkeji na-akparaghị ókè maka oku maka .19,90 XNUMX / ọnwa.
Ee ndi enyi, Amena alaghachila. Onye na-acha ndụ ndụ na-esonyere ọtụtụ n'ime anyị n'oge ahụ na, anyị nwere ike ịsị, na ọ bụ kpochapụwo mgbe a bịara n'ihe gbasara ekwentị. Amena abiala na ndu Orange na onu ogugu ya di egwu. Onye ọrụ a na otu mmegharị ahụ na-egosiputa ya na ọnụego ha. Atụmatụ ekwentị ya na-elekwasị anya n'ụdị onye ọrụ ọ bụla: otu ọnụego maka ndị na-eji obere mkpanaka ha, nke ọzọ maka ndị na-ekwu okwu ntakịrị na onye ọzọ maka ndị chọrọ ihe niile. Ọnọdụ dị ịrịba ama anọ.
Ngo mbu bu maka ndi n’adighi eji ekwenti ha n’ulo. Amena chere banyere ha wee nye ha 4GB, kpọọ na 0 cents na nkeji na SMS akparaghị ókè maka € 6,95 / ọnwa. Mana ọ bụrụ na ị na -ekwu obere site na ekwentị mkpanaaka gị, enwere ike ị ga - enwe mmasi na ọnụego ya na 10GB, nkeji na - akparaghị ókè na SMS na - akparaghị ókè maka € 9,95 kwa ọnwa.
Companylọ ọrụ na-acha akwụkwọ ndụ na-enye gị atụmatụ mkpanaka na 25GB, oku na-akparaghị ókè na SMS maka € 19,95 / ọnwa. Mana ọ bụrụ na 10GB ezughị ezu maka gị, atụmatụ ọhụụ ga-amasị gị karịa. Ọnụọgụ ikpeazụ na-enye gị 30GB, oku na-akparaghị ókè na SMS maka € 24,95 / ọnwa.
Anyị maara na ọ siri ike ịhọrọ ọnụego Amena, n'ihi na ha dị ezigbo mma. Ọ bụrụ na ị chọghị ikpebi, na njikọ a ị nwere ike ịnweta ozi ndị ọzọ.
Simọn oroma abụghị ihe ndabakọ na nke a bụkwa ụlọ ọrụ nke ndị otu oroma. Agbanyeghị, Simyo nwere obere ọrụ pụrụ iche: ị nwere ike ịmepụta ọnụego gị. Can nwere ike ịhazi atụmatụ gị site na iji ọtụtụ ma ọ bụ obere data yana obere ma ọ bụ obere olu nkeji. Ihe Ị chọrọ.
Tupu ịkọwapụta etu ahaziri ahaziri ahaziri si arụ ọrụ, achọrọ m ịgwa gị gbasara ọnụego nke Simyo na-enyegoro gị ahazi. Companylọ ọrụ ahụ na-enye anyị ego anọ anyị nwere ike ibute. Anyị nwere ọnụego na-enweghị oke, ya bụ, euro 0. Anyị nwere obere ego nke gụnyere nkeji 20 na 100MB maka € 2 kwa ọnwa. Ọnụego zuru oke maka WhatsApp na nkeji 50 na oku 100MB maka € 3,5 / ọnwa. Nke ikpeazu ikpeazu bụ maka ndị na-ekwu okwu na sọfụ sọfụ. Nke a na-enye anyị nkeji 100 na 2GB maka € 6,5 kwa ọnwa.
Ọ bụrụ na ọnweghị nke ọnụego ndị a kwenyere gị, cheta na ị nwere ike ịmepụta nke gị n'ụzọ dị mfe. Ihe mbụ ị ga - ahọrọ bụ data ịnyagharị na mkpanaka gị. Nweghị ike ịhọrọ data iji chọgharịa, mana kachasị 40GB. Emechaa, ị ga - ahọrọ ọnụọgụgụ nke oge ị ga - akpọ, site na nkeji 0 gaa oku na - akparaghị ókè. Nkwado anyị, na nke a, doro anya: mee ọnụego gị. Onweghị ihe dị mma karịa inwe ike ịhọrọ ihe ịchọrọ imefu n’usoro nke data na nkeji nkeji. Agbanyeghị, ọ bụrụ n'ịchọrọ ịhụ ohere ndị ọzọ Simyo na-enye, banye ebe a.
Lowi bụ otu n'ime ụlọ ọrụ ekwentị mkpanaaka kachasị mma nke ndị ọrụ jiri kpọrọ ihe, ekele maka ọnụ ahịa akụ na ụba ya na ohere nke ịmepụta ọnụego kpamkpam na-amasị anyị. Nwere ike ịnweta ma hazie ọnụego gị site na 8GB ruo 30GB nke data na mkpanaka gị yana, n'ihe gbasara olu nkeji, ha niile nwere oku na-akparaghị ókè.
Ọ bụrụ na anyị ga-anọnyere otu n'ime ọnụego ha, nke ahụ ga-abụrịrị ọnụego Onwe gị na 8GB maka € 7,95 kwa ọnwa. Ọnụ ego dị oke egwu na ihe ọ bụla a na-apụghị imeri emeri. Pụrụ ịhụ na ike nke ga-ekwe omume ọnụego ntọala na njirimara si ebe a.
Kedu ọnụego ị nwere ugbu a na nke ị ga-agbanwe ma ọ bụrụ na ị nwere ike? Dịka ị hụworo, ohere dị na enweghi njedebe na ihe niile dabere na gị. Edozila ma nọrọ na-ege ntị na ntinye a n'ihi na anyị ga-emelite ya kwa ọnwa. Ma ọ bụrụ na ịchọtabeghị ọnụego gị zuru oke ebe a, ịnwere ike iji ya Roams telephony atụnyere ịchọta nhọrọ kachasị mma na-enye gị ohere ịchekwa.